Noho ny tolo-tànana avy amin’ny orinasa sinoa Trina Solar, dia misitraka ny takelaka mandeha amin’ny herin’ny masoandro miisa 54 isa manome herinaratra manana tanjaka 12 kwh ny biraon’ny WWF eny Antsakaviro. Ampiarahana amin’ny fitaovana mitahiry herinaratra dia ny “onduleurs” izany amin’ny famatsiana herinaratra ho an’ny toeram-piasana. Mamokatra herinaratra, izay misy ambim-bava mihitsy, ka ary hanampiana ny an’ny Jirama ny tsy lany. Zava-dehibe ao anatin’izao ny fiantraika ara-tontolo iainana noho ny fihenan’ny entona karbona (C02). Ny “onduleur” dia manome tondro isan’andro ny famokarana angovo azo miampy ny fihenan’ny CO2 ao amin’ny toeram-piasana; Ohatra iray amin’izany ny tamin’ny 2 desambra 2018, namokaranay 53 kwh ary ny fihenan’ny entona karbona ho 37, hoy ny fanazavan-dRtoa Zina Rakotoarisoa avy amin’ny WWF.